Overland: Anotyisa Chikwata-Yakavakirwa Sarudzo Vhidhiyo Game | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida kupona mitambo yemavhidhiyo, sanganisa iyo nehurongwa uye zvakare nechikwata-chakavakirwa dhizaini, ndiko kuti, iyo mitambo yemavhidhiyo inoratidza iyo nzvimbo mumatunhu kana zvikamu zveiyo nhanho pachiratidziri. Zvakanaka, kana iwe uchida izvo zvese, nepanyika Iri zita rinonyatsokufadza. Uye zvakare, ine zuva rekuburitsa, uye kunenge kuri kudonha kwe2019, saka pakupera kwegore tichava nemutambo wevhidhiyo weLinux futi.
Finji's Overland ine basa kubva graphic inonakidza uye dhizaini, ine yakanaka mhedzisiro uye inogona kuonekwa mumifananidzo isiri kuuya izvozvi. Mariri muchave nematanho akasiyana munyika yepashure-apocalyptic inoenderana nenyika dzekuchamhembe kweAmerica, uko kwatichafanira kusangana nematambudziko akateedzana, sekugadzirisa zvimwe zviwanikwa, mafuta, nhumbi, zvekurapa, nezvimwe, nguva imwecheteyo.nguva yatinowana mepu yakazara nemaonero aya zvichienderana nemabhokisi sezvandataura kare ...
Usatarisira mifananidzo mikuru yakajeka senge mamwe mazita, unogona kutoona mumufananidzo kuti iwo magirafu ari kure neizvozvo, asi pamwe izvo zvinoitawo zvinakidze. Kwete chete katatu kukunda, asiwo mimwe mitambo yemavhidhiyo ye indie vagadziri ivo vari kutidzidzisa isu kuti iwe unogona kubudirira pasina hukuru hwekuratidzira kana chaiwo maficha.
Iyi inonakidza mamiriro uye iwo magiraidhi uye runako rwemhando iyi yezano inoita kunge iri kubudirira uye vatambi vanofarira rudzi urwu rwemavhidhiyo mutambo vanofara kwazvo nekusvika kwezita iri. Muchokwadi, harisi iro rekutanga zita ratakataura pane ino blog yerudzi Chikwata-chakavakirwa, uye zvakanyanya kushomeka zvemhando iyi zvinozivikanwa senge zano kana kupona. Panguva ino, iwe unogona kuwana yekutanga kuvaka kubva kuitch.io kana kumirira kuti iburitswe pane yeValve Steam chitoro chedu chatinofarira chikuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Overland: inotyisa yechikwata-yakavakirwa zano vhidhiyo mutambo